ASA TAGNAMARO : Horaisin’ny Minisiteran’ny Serasera ny fanamboarana ny lalana simba eny Soanierana
Tontosa ny sabotsy 17 aogositra 2019 lasa teo ny fanatanterahana ny hetsika asa tagnamaro andiany faha-enina Manerana ny Nosy. 19 août 2019
Navitrika ny mponina ary saika naneho ny firaisankinany avokoa satria efa azo laza lazaina fa tafapaka amin’ny rehetra ny finiavana manadio sy manamboatra ny tontolo manodidina. Anisany naneho ny fahavononany hatrany ny eo anivon’ ny Minisiteran’ny Serasera sy kolontsaina ka teny Soanierana, Tsaralalàna , Petite vitesse, Ambodifilao, Andravoahangy no toerana nodiovin’izy ireo tamin’izany.
Nisongadina indrindra tamin’io fotoana io ny nandraisan’ny teo anivon’ity minisitera ity ny fanamboarana ilay lavakabe nanapaka ny lalana eny Soanierana izay efa ho herintaona mahery. Taorian’ny antso nataon’ny mponina teny amin’ny manodidina manoloana ny fijalian’izy ireo mahakasika io lalana io no nandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany, ka nirotsahana an-tsehatra amin’ny famitàna izany.
Hiezaka hifanome tanana ny mponina ka vinavinaina hovitaina ao anatin’ny roa volana ny asa raha ny tomban’ireo injeniera miara-miasa amin’ny Minisitera. Fanombohana ny asa moa no natao tamin’io sabotsy io ary efa nankasitraka sahady ny fahavononana ireo mponina eny amin’ny manodidina .